स्थापनाको ४५ वर्षमा तीन ढल मात्र निर्माण ! – Makalukhabar.com
स्थापनाको ४५ वर्षमा तीन ढल मात्र निर्माण !
काठमाडौँ, फागुन १३ । खानेपानी तथा ढल निकास विभागले आफ्नो स्थापनाको ४५ वर्षमा तीन वटा मात्र ढल निर्माण गरेको छ । खानेपानी र ढल निकासका लागि विसं २०२९ मा स्थापित विभागले हालसम्म काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिर तीन ढल निर्माण गरेको छ ।
विभागका ढल व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख टीकाबहादुर चौधरी विभागले अहिले मागका आधारमा १०७ आयोजनाको ढल निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड तयारी र गुरुयोजना निर्माण गर्ने काम गरिरहेको बताउँछन् । “गत आर्थिक वर्षमा २१ र यस आर्थिक वर्षमा ८६ आयोजना माग भएकाले उक्त आयोजनाको गुरुयोजना निर्माण गरिरहेका छौँ,” चौधरी बताउँछन् ।
ग्रामीण तथा शहरोन्मुख क्षेत्रमा खानेपानी र ढल निकास गर्ने उद्देश्यले विभाग स्थापना भए पनि विभागले ढल निकासको क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिँदा काम हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । विभागले हाल देशभरका ५१ जिल्लामा ढल निर्माण तथा प्रशोधनका लागि गुरुयोजना तयार गरिरहेको छ ।
नागरिकले प्रयोग गर्ने पानीमध्ये ८० प्रतिशत प्रयोग गरेपछि खेर जाने भएकाले त्यही अनुसारको गुरुयोजना विभागले बनाउँदै आएको छ । विभागका इञ्जिनीयर ऋषिप्रसाद रिमाल विभाग २०२९ सालमा स्थापना भए पनि ढल निकासको काम विसं २०५६ देखि प्राथमिकतामा परेकोे बताउँछन् । थैव ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजना र हरिसिद्धि ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजना सबैभन्दा पुरानो आयोजना भएको र ती अन्तिम चरणमा पुगेको इञ्जिनीयर रिमालको भनाइ थियो । विभागको नाम खानेपानी तथा ढल निकास विभाग भए पनि विभागका लागि छुट्याइएको अधिकांश रकम खानेपानीमा खर्च हुँदै आएकाले ढल निकाससम्बन्धी काम ओझेलमा पर्दै गएको –उनी बताउँछन् ।
खेर गएको पानी तथा ढललाई प्रशोधन गर्नका लागि जग्गा नहुँदा ढल निकासको काममा समस्या हुँदै गएको विभागको भनाइ छ । ढल व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख चौधरी ढल निकासका लागि चाहिने प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि विभागले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल चलाइरहेको बताउँछन् ।